Igama elithi "isifebe" ngolimi Russian kuyinto namabala omubi, futhi akusimangazi lokho. De jure, imisebenzi abamele umsebenzi endala alikho emthethweni futhi yisigwebo ngabameli umthetho nokuhleleka. De empeleni waba, ambalwa amadoda ngeke ofuna ukuxhumanisa isiphetho sabo intombazane has wabhekana nesimo esifanayo. Ngakho kungani ayafeba?
Impendulo yokuqala futhi esobala kunazo zonke umbuzo kanjani abesifazane ayafeba, ngukutsi nobunzima ngemali. Kuyinto imfihlo ukuthi kuleli zwe lanamuhla, konke ngandlela-thile lumayelana umcebo. I emikhulu edolobheni, izindleko eziphakeme zokuphila. abafundi abasha zesifazane ubani lo muzi woza, ihlangabezane nezilingo eziningi ngendlela amafasitela ezitolo, izindawo zokudla, ubuhle salon, amakilabhu, nakwezinye izinto eziphathelene nako. Yiqiniso, omunye scholarship ukujabulela ukuphila "ngokugcwele" amathemba kungenzeki brilliant umsebenzi cishe "ukukhanya" intombazanyana. Kodwa ngifuna ukuba ujabule manje. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi abaningi wobulili fair, hhayi kakhulu kuyixine izisekelo zokuziphatha, uyavuma ukuthola imali kalula.
experiment Social e Perm
Ukuze uqonde ukuthi ukuba ayafeba, thatha isibonelo kusuka empilweni yangempela. Akunjalo kudala esifundeni Perm bevale inqwaba amabhizinisi ezinkulu ezimbonini. Ngenxa yalokho, sanciphisa kangcono isibalo semisebenzi. Abesifazane abaningi balahlekelwe yimisebenzi yabo. Ngaphezu kwalokho, ukwehla wafika ezolimo. Abantu baphoqeleka ukuba bathuthe ngobuningi enhlokodolobha, kodwa kwakungekho akwazi ukuthola umsebenzi akuyona yonke. Kungokwemvelo, Ngakho-ke, ukuthi siyanda isibalo eyenziwa emantombazaneni asemancane, uya bar. Labo, ngenxa yokushoda kwezimali akakwazanga ngisho ukufika Perm, zahlangana okubizwa ngokuthi "en-umzila" izifebe, okungukuthi nje izifebe, indawo kabani lomsebenzi indlela, futhi main akuxhomekile - Abashayeli bamaloli. Ngo-2004, iziphathimandla zendawo ziye zakhonza umbuzo indlela ayafeba, futhi bahlela ukuba kube uhlobo lokuhlolwa nomphakathi: umsebenzi "amabhu" wayalelwa. Ngaphezu kwalokho, usizo lanikezwa ubani efuna ngezinkani ukuphula aphume umjikelezo omubi. On isifiso sakhe ukuqala impilo entsha wathi abesifazane 60 abaneminyaka kusuka iminyaka engu-15 kuya kwengu-40. Ngamunye wabo yayenziwa anezikhala ngezinsuku okuthunyelwe we isikhonzi, esitolo umsizi, umhlengikazi, futhi imisebenzi efanayo angadingi amakhono akhethekile. Ngemva konyaka, ukuhlola ukuthi wafingqa: kwatholakala ukuthi amaphesenti angu-90 ethi "lokuhlola" bayeka imisebenzi yabo bese ubuyela ekuphileni okuvamile, okungukuthi, emuva iphaneli.
Enye impendulo enengqondo yombuzo indlela ayafeba, wukuthi isidingo ngokungavamile okusezingeni eliphezulu ukuba ihlanganyele ubulili. Ukusebenza emkhakheni imisebenzi enjalo, abakwazi kuphela ukwanelisa libido yakhe, kodwa futhi ukhokhelwe yona. Nokho, lokhu i-agumenti ithi sibi. Ngokusho kocwaningo, ngephesenti elilodwa kuphela yabesifazane singase orgasm ngesikhathi alale nomuntu iklayenti. Cishe, iningi amadoda abakujabuleli kakhulu bacabanga ukuthi ayikho inkinga ngokuya ocansini nje ngenxa yokukhokha, ngakho uthanda ukuba izitike kuyize bakhe bacabanga ukuthi yohlu kuphela abesifazane ngempela "ezinganeliseki".
Indlela ayafeba? Ngokumangalisayo, abameleli abaningi okwaxoxwa nabo kulo mkhakha endala baye bavuma ukuthi kule ebhizinisi inkampani nomngane. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile okubizwa ngokuthi "inkinga yomuzi": iningi ubulili-izitolo emadolobheni amakhulu ukunikeza ezigcemeni zabo zokuhlala khulula.
Yini siphuma? Ukuza aphume: ukubaluleka
Coitus interruptus: Ingabe ikhona ingozi yokuthola igciwane ukhulelwe?
Okunhlobonhlobo ubulili: kungcono kuwufanele ngizame? Kanjani ukuze ungeze ezihlukahlukene ukuze ukuphila kwakho ucansi?
Kanjani ukuze ajabulise indoda ngamagama? Amathiphu zothando
Foreplay. Kanjani, kuphi futhi nini?
Lope de Degas, "Fuente Ovejuna": isifinyezo
Ohlala «Comedy Club» - Marina Kravets. Biography nomlando impumelelo
Imisinga kwezilwandle. Kuyini umkhuhlane futhi efudumele? Incazelo nezibonelo
Kwezinye izimo, uxhumano wathungela ikholomu?
Kanjani ukuthi kuziveza uphawu chvostek?
Ubuqotho ... Imithetho Yokuthembeka
Iridocyclitis oyingozi futhi ezingalapheki: ukwelashwa, izimpawu, imithi